Ho avy tsy ho ela any India ny audio spatial an'ny Apple Music | Avy amin'ny mac aho
Ny audio Apple Spatial audio miaraka amin'i Dolby Atmos miaraka amin'ny endri-javatra No-Loss dia nanjary azon'ny mpampiasa atiny mozika famandrihana tamin'ny herinandro lasa teo, fa ny mpanjifa any India kosa dia nanamarika fa ireo fampiasa roa mbola tsy azony. SAINGY toa tsy ho ela dia ho tanteraka eo amin'ny lafiny an'izao tontolo izao.
Ao amin'ny Twitter, ireo mpampiasa Apple Music any India dia nametra-panontaniana ny amin'ny antony tsy misy ny audio spatial sy ny fotoana mety hiasana. Indrindra ary indrindra satria ny fisongadinana dia efa tonga sy mandeha ho an'ny mpampiasa sasany. Dolby Atmos miaraka amin'ny audio spatial sy ny fatiantoka kalitao mbola tsy natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany India, Saingy tsy nanadino ny firenena i Apple ary nanamafy fa hisongadina tsy ho ela ireo fiasa ireo.
El Tranonkala Apple Music any India manana marika "ho avy tsy ho ela" ho an'i Dolby Atmos sy Lossless Audio. Tsy mbola misy daty famotsorana manokana, fa noho ny fahitan'ny mpampiasa sasany ny safidy ho avy sy ny fandehany, ny mpamandrika Apple Music any India dia mety tsy hiandry ela intsony.
Mailo isika. Ny tiana holazaina dia hoe tsy fantatsika ny antony mbola tsy ananana ireo endri-javatra ireo any India, fa rehefa heverina fa tena manokana amin'ny "zavatra" azy i Apple, dia mety ho mendrika ny fanazavana rehetra. Ny tena izy dia tsikelikely no ahazoan'ireo mpampiasa rehetra mampiasa ireo kalitao miasa amin'ny mozika sy ireo serivisy orinasa hafa. Tsy maintsy milaza an'izany aho Mahafinaritra ny mahay mihaino hira sy fandaharana sasany miaraka amin'io fahaizana manokana io.
Aza adino izany audio spatial izany dia mifanentana amin'ny AirPods, AirPods Pro, na AirPods Max.
Avy amin'ilay faritra mitempo:
BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro, na Beats Solo Pro.
Ao amin'ny Mac:
MacBook Pro (maodely 2018 na taty aoriana), MacBook Air (maodely 2018 na taty aoriana), na maodely iMac (2021).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ho avy tsy ho ela ny audio spatial an'ny Apple Music any India